Kumaa ahaa Fred Harris, oo ahaa farshaxamiistaha reer Australiya ee 30s? | Tattoo
Kumaa ahaa Fred Harris, oo ahaa farshaxamiistaha reer Australiya ee 30s?
Waxaa laga yaabaa inaad taqaan magacyo caan ah oo ka mid ah xaraashka sida Badmareen Jerry, ama ugu yaraan waxay kuugu eg yihiin adiga aqoonLaakiin taasi maaha in la yiraahdo kuwa madow, sida Fred Harris, maahan kuwo xiiso leh.
Sida aad ku arki doonto maqaalkan loogu talagalay ninkan farshaxanka ah ee reer Australia, Fred Harris wuxuu ahaa shaqsiyad ka tirsan Sydney 30-meeyadii, halyeey xitaa shakhsiyaadka la sawiro sida Betty ballaadhan.
1 Farshaxanka Fred Harris
2 Sydney sanadihii 30-naadkii
Farshaxanka Fred Harris
Fred Harris waxay u badan tahay inuusan ogeyn in istudiyaha yar ee tattoo ee uu ka furay 1916 wadada Sussex Street ee Sydney uu noqon doono astaanta tattoo ee qaarada Australia. in ka badan soddon sano, laakiin taasi waa sida ay ahayd.
Inta lagu jiro waqtigan, darbiyada lagu qurxiyay shaybaarka tattoo ee istuudiyaha Harris ayaa goobjoog ka ahaa kumanaan tattoos ah, oo aan ka badnayn kana yarayn 2000 sanadkii. In kasta oo ay u muuqan karto, macaamiishiisu ma ahayn kaliya badmaaxiinta, laakiin sidoo kale waxaa jiray fardooley iyo xitaa haween (tattoo-ga xiddigta xilligaas ayaa ahaa mid jilicsan!).
Sydney sanadihii 30-naadkii
Ogaanshaha Fred Harris iyo shaqadiisuba waxay sidoo kale noo ogolaaneysaa inaan ogaanno sida uu ahaa Sydney of the 30s mid aad u gaar ah: taatuuga, ilaa in yar ka hor adduun dhulka hoostiisa iyo marka laga reebo caadiga ah.
SWaad ogtahay in Fred Harris uu sawiray astaamo badan oo kala duwan, laakiin moodku wuu is badalayay sida waqtiyadu sidoo kale isu badaleen. Tusaale ahaan, markii lagu dhawaaqay Dagaalkii Labaad ee Adduunka, nashqadaha naqshadeynta ku yeeshay habeen-hore waxay ahaayeen kuwa la xiriira waddaniyadda iyo dagaallada, sida calammo ama nambarro maamul.
55 Noo sheeg, maxaad u malayn sheekada horyaalkan? Ma leedahay wax tattoos ah oo uu sameeyay farshaxan yaqaan caan ah? Xusuusnow inaad noo sheegi karto waxaad rabto, kaliya waa inaad nooga tagtaa faallooyin!
Wadada buuxda ee maqaalka: Tattoo » Tattoos » Fanaaniinta Tattoo » Kumaa ahaa Fred Harris, oo ahaa farshaxamiistaha reer Australiya ee 30s?
Tattoos ayaa u waxyooday dabeecada Tinkerbell
Skull iyo tattoos ubax, ururinta naqshadaha